FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiChuvash IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHiri Motu IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKazakh IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiKwangali IsiKwanyama IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaltese IsiMaya IsiMyanmar IsiNdebele IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTatar IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo isiZapotec (saseIsthmus)
Incwadi iEncyclopædia Britannica ichaza i-Ista “njengoyena mbhiyozo unkqenkqeza phambili amaKristu awusebenzisela ukubhiyozela Ukuvuswa kukaYesu Kristu.” Noko ke, ngaba ingumbhiyozo wamaKristu?
Ukuze siqiniseke ngobunyani bento, kufuneka sazi iinkcukacha ngayo. Ngokufanayo, ukuze siqiniseke ukuba i-Ista ngumbhiyozo wamaKristu, kubalulekile ukuba sihlole iinkcukacha ngayo.
Okokuqala, uYesu wacela abalandeli bakhe ukuba bakhumbule kungekhona ukuvuka kwakhe kodwa ukufa kwakhe. Umpostile uPawulos wasibiza ngokuba ‘siSidlo Sangokuhlwa seNkosi’ esi sihlandlo.—1 Korinte 11:20; Luka 22:19, 20.
Ngaphezu koko, le ncwadi ithi, amasiko amaninzi eIsta “akananto ingako yakwenza” nokuvuswa kukaYesu “kodwa ngamasiko eza nabantu.” Ngokomzekelo, ngokuphathelele iqanda nomvundla ezixhaphaka ngeIsta, incwadi iThe Encyclopedia of Religion ithi: “Iqanda limela ukuvuka ekufeni oku kwentshontsho eliphuma ekhobeni leqanda.” Yongeza ngelithi: “Umvundla wawusaziwa njengesona sidalwa sanda ngokumangalisayo yaye ngenxa yoko umela ukuthwasa kwehlobo.”
UPhilippe Walter, onguprofesa weencwadi zakudala ucacisa indlela awangena ngayo la masiko kumbhiyozo weIsta. Wabhala wathi, “xa kwakuzanywa ukuguqula abahedeni babe ngamaKristu,” kwabonakala kuliqhinga elilula ukuyamanisa umbhiyozo wabahedeni “wovuko olwenzeka entwasahlobo lwezinto ebezifile ebusika,” nokuvuswa kukaYesu. UWalter wongeza ngelithi kwasebenza kakhulu ukufaka “imibhiyozo yamaKristu” kwikhalenda yabahedeni kuba kwenza kwaguquka abaninzi.
Le nkqubo yokuyamanisa iimfundiso zobuKristu nezobuhedeni zange yenzeke ngexesha lokuphila kwabapostile, kuba ‘babebuthintela’ ubuhedeni. (2 Tesalonika 2:7) Umpostile uPawulos wathi, emva “kokumka” kwakhe, abantu ‘babeya kusuka bathethe izinto ezijijekileyo ukuze batsale abafundi emva kwabo.’ (IZenzo 20:29, 30) Yaye ngasekupheleni kwenkulungwane yokuqala, umpostile uYohane wabhala echaza ukuba abantu babesele beqalisile ukulahlekisa amaKristu. (1 Yohane 2:18, 26) Ekugqibeleni, kwakuvele ithuba lokuba amasiko obuhedeni amkeleke.
“Musani ukubotshwa edyokhweni kunye nabangakholwayo.”—2 Korinte 6:14.
Noko ke, abanye basenokucinga ukuba amasiko obuhedeni anjeIsta akwamkelekile—kuba kwakusenza “abahedeni” baqonde oko kuthethwa kukuvuswa kukaYesu. UPawulos wayengena kuyivumela loo nto. Nangona wayeqhele ukudibana namasiko amaninzi xa ehamba kumazwe awayephantsi koBukhosi baseRoma, akazange amkele nalinye kuba nje efuna ukwenza abantu bazi ngoYesu. Kwelinye icala walumkisa amaKristu esithi: “Musani ukubotshwa edyokhweni kunye nabangakholwayo. Kuba bunabudlelane buni na ubulungisa nokuchas’ umthetho? Okanye kunakwabelana kuni na ukukhanya nobumnyama? ‘Ngoko ke phumani phakathi kwabo, nizahlule,’ utsho uYehova, ‘nento engahlambulukanga ningayichukumisi.’”—2 Korinte 6:14, 17.
Ezi nkcukacha zisichazela ntoni ngeIsta? Zisichazela ukuba i-Ista ayingombhiyozo wamaKristu.